Falanqeynta Kulanka Southampton Vs Liverpool: Reds Oo Hogaanka Kali Ku Noqon Karta
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka Southampton vs Liverpool: Reds oo hogaanka kali ku noqon karta
January 4, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa isha ku haysa inay markale qabato hoggaanka iyadoo haatanba farqiga goolasha ku haysa haddana u baahan inay saddex dhibcood oo saafi ah markale tagto.
Labada kooxoodba waxa ay sanadkii hore kusoo dhammaysteen bar-bardhacyo qalbi jab leh, Saints ayaa gegidooda bar-bardhac goolal la’aan ah kula soo galay West Ham United halka Reds ay lasoo dhaafi waayeen Newcastle United.
Southampton Danny Ings ayaa ka soo laabtay dhaawac kulankii Southampton ee ay barbaraha 0-0 la galeen West Ham wuxuuna doonayaa inuu ku soo bilowdo kulanka kooxdiisii ​​hore ee ka hor imaaneysoLiverpool Isniinta.
Liverpool Thiago ayaa ka soo laabtay dhaawicii uu in badan ku maqnaa kulankii Arbacadii ay bar-baraha 0/0 ah la galeen kooxda Newcastle Diogo Jota ayaa isna sidasi u fogeen.
Joel Matip ayaa garoomada ka maqnaan doona seddex isbuuc. Rhys Williams ayaa ku soo bilaabanaya.
Georginio Wijnaldum ayaa ku soo laaban doona line-upka kooxda ka dib markii la nasasiiyay kulankii hore ee Newcastle.
Southampton ayaa laga badiyay mid kasta oo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay Liverpool, iyadoo dhalisay kaliya labo gool, waxaana laga dhaliyay 17 gool kulamadaas.
Liverpool ayaan laga badinin sideedii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay la ciyaareen Southampton (W6 D2), iyagoo shabaqa ilaashaday lix ka mid ah kulamadaas.
Liverpool ayaa badisay kulankeedii ugu horeeyay ee horyaalka kaliya hal kulan oo ka mid ah sideedii sano ee ugu dambeysay markii ay bilaabayaan sanadka cusub meel ka baxsan garoonkooda (D4 L3), guushaaasina waxay timid Burnley sanadka 2018.
Kooxda heysata horyaalka ugu sareysa ayaa laga badiyay kulankoodii ugu horeysay ee horyaalka kaliya labo ka mid ah 31kii sano ee ugu danbeysay ee taariikhda (W18 D11), iyadoo Man Utd laga badiyay 0-3 kulankii Newcastle ee 2012, iyo 1-2 oo ay la ciyaareen Spurs 2014.